Seniors soomaaliga - 2019 SAGAMORE YEARBOOK
2019 SAGAMORE YEARBOOK
Seniors en español
SSagamore sanadkan waxay bixinayaan wax qadarin leh waxana la dhaha “Senior send-off.” Tani waa fariin ka timid qoyska ilmahu u qalin jabinayo taas wuu sawir la socdo. Sawirkaas wuxu noqon kara marku ardaygu/ardayadu yareyd ama yara ama sawir eega ah. Wax yabaha noocan oo kale ah badana waxa loo iibiya si deeq loogu ururiyo buuga sanad dugsiyeedka. Halkii aan
u oggolaan lahayn khasatan qoysaska rabay inay bixiyan deeqda si ay uga faa’iideystan fursadan, Anagu fursadan waxaan siineyna eega qoys kasta oo leh labiyotobnaad. Si aad tan u samayso waxaan ka rabna/codsaneyna inaad ku darsato deeqda hadad rabto. Hoos waxa ku qoran shuruudaha laga rabo inaad raacdo.
Hal sawir kaliya oo mar hore ah ama mid eega aha ama sawir rqoys
Magaca ardayga/ ardayada
1-3 fariin qoraal ah
Luuqad kasta waan aqbaleyna. Qoraalka laguma badali karo hadi higaada ama naxwuhu ka qaldan yahay.
Wax walba oo aad u bahan tahay inaad ka ogaato labiyotobnaad send offs iyo soo gudbinta Waxa laga heli karaa bogga cusub ee Sagamore buuga sanad dugsiyeedka. (sagamoreyearbook.weebly.com). Kani waa bogga aad ka heli doonto isku xirka aad kusoo gudbin doonto sawirka labiyotobnaadka, xigasho (quote) iyo the senior send-off ( sawir iyo fariin isla socda)
Senior Send-Off Submission
Home Seniors Purchase Contact